Dhacdooyinka isboorti ee ugu wanaagsan iyo tartamada - ULLER
TAARIIKH 2X1 IN AY KHUDBAD BADAN - CODE: 2X1YA
Dhacdooyinka ugu sareeya 10 dhacdooyinka isboorti iyo tartamada
Dadka jecel Adventure waxay ogyihiin in adrenaline uu yahay mid la qabatimo. Nolosha ugu qaadista xadka ciyaaraha fudud iyo isboortiga xad-dhaafka ah waxay noqotay qeyb aasaasi u ah nolol maalmeedka halyeeyaha kaasoo halleeyo xilliyada ugu daran, gaar ahaan markay ka qeyb galayaan tartamada ay noo muujinayaan xirfadahooda iyo hibooyinkooda khataraha.
Maxay yihiin tartamada ugu daran?
The dhacdooyinka isboorti ee xad-dhaafka ah, ciidaha iyo tartamada runtii way fiican yihiin! Waxaa jira waxyaabo badan oo adduunka ah, laga soo bilaabo kuwa ugu dhifka yar iyo hal-abuurka, illaa kan ugu caansan iyo halyeeyada. Mid kasta oo ka mid ah waxaan awood u leenahay inaan goobjoog ka ahaano kooxaha waaweyn ee isboortiga iyo ballamo cusub oo waji ka waji ah la kulmeyno awoodaha dabeecadda, meelaha ugu sarreeya, hirarka ugu daran, iyo waddooyinka ugu dheer uguna halista badan.
Ma taqaanaa qaar ka mid ah? Akhriso oo wax ka baro qaar ka mid ah dhacdooyinka ugu wanaagsan uguna daran, ciidaha iyo tartamada tacaburka adduunka oo dhan!
Haddii aad jeceshahay isboorti xad dhaaf ah iyo xuriyad, markaa shaki la'aan waxaad jeceshahay Ciyaaraha X-ga sida aan annagu jecel nahay! Xayawaanadan tartamada isboorti ee aadka uxun waxay sifiican isku daraan xamaasad, ficil iyo muusig, iyagoo isu keenaya xirfadlayaal isboorti oo kakala socda adduunka oo dhan qeybaha kaladuwan. Waxaas oo dhan waxay ku hoos socdaan jihada kooxda ESPN, tan iyo markii tartanka la abuuray 1995.
Sidee Ciyaaraha X u shaqeeyaan?
ka X Ciyaaraha waxaa loo fuliyaa si gaar ah. Tartamayaashu waxay ka qayb galaan iyagoo ku guuleysta billadaha dahabka, qalinka iyo naxaasta, iyo sidoo kale abaalmarinta abaalmarinta. Si kastaba ha noqotee, waxay inta badan u tartamaan sharafta ka timaadda ka mid noqoshada jagooyinka sare ee tartankan, oo caan ka ah adduunka.
Sidaan ku aragnay Ciyaaraha Olombikada, waxaa jira laba nooc oo ah Ciyaaraha X: jiilaalka iyo kuwa xagaaga. Gorfaynta tartanka xagaaga waxaan ka helaynaa Skate, BMX, motocross, xaraash, duubista, isu soo baxa, mootada (skateboard) iyo fuulitaanka, iyo tartanka mootada. Xilliga jiilaalka waxaadna ku tartami doontaa barafka, barafka iyo barafka.
Wax kale oo qabow oo ku saabsan X Ciyaaraha ayaa ah in daabacaadyadeeda kaladuwan marwalba aan lagu qabanaynin hal meel, sidaas darteedna waxay u egtahay inay saldhig u tahay meelo kala duwan oo meeraha ah, laga bilaabo Kalifoorniya ilaa Japan. Intaa waxaa dheer, waxaa lagu daraa xafladda caanka ah ee bixisa muusikada tooska ah "X Fest" oo bixisa kulamada iswada qorista ee ciyaartooyda iyo howlaha kale ee daawadayaasha, taageerayaasha iyo waliba tartamayaasha laftooda.
Waa maxay Pantin Classic?
Markii hore loo yiqiin "Pantin classic" ama "Galicia Surf Pro", Galicia Classic Surf Pro waxaa lagu qabtaa xeebta Pantín, Valdoviño (oo ku taal gobolka A Coruña) iyada oo qayb ka ah wareegga wareegga World Surf League (WSL).Halkaas kuwa adduunka ugu sarreeya ayaa si toos ah iyo toos ah u kulmaya inta lagu jiro tijaabada adag ee QS 10.000, oo sheegata inay tahay horyaalnimada ugu muhiimsan ee dhammaan wareegyada Yurub.
El Abanca Galicia Classic Surf Pro,kaas oo sanadihii la soo dhaafay ku shaqeynayay iyadoo ay maamusho Naadiga Praia de Pantín (oo leh ABANCA oo ah maalgeliyaha ugu weyn), waxay soo uruurisaa adduunka ugufiican aduunka sanadwalba si loogu tartamo imtixaanada qaybaha raga iyo dumarka. Bixiyeyaasha adduunka ugu wanaagsan ayaa booqda goobtan si ay ula tartamaan una muujiyaan dhammaan kartidooda.
Waa, mid ka mid ah tartamada loogu talo galay in lagu fidiyo hawada sare ee Yurub oo dhan, waxay martigelisaa in ka badan 100.000 oo qof sanadkii waxayna bixisaa qaab tusaale ah oo gabi ahaanba ku wareegaya hareeraha, laga bilaabo dharka iyo alaabada isboortiga, ilaa rugaha cuntada iyo muusig. Runtu waxay tahay in waxqabadyadooda oo dhami ay yihiin kuwo aad u qabow, maxaa yeelay waxay ku dhammaataa inay noqdaan tartan isla markaana isla mar ahaantaana xaflad, oo leh waxqabadyo astaan ​​ah oo ay ku jiraan baabtiisyadoodii caanka ahaa ee caanka ahaa.
BADDA AMA BADDA
O Marisquiño waa mid ka mid ah dhaqanka ugu muhiimsan magaalooyinka iyo ciidaha isboortiga ee Yurub tan iyo markii la abuuray 2001. Waa xaflad saddex maalmood ah oo bilaash ah oo dibedda ah, taas oo in ka badan 160.000 qof ay ku raaxaystaan tobanka ugu sareeya tartamada isboorti, bandhig dhaqameed, gastronomy aad u fiican, tartamada qoob ka ciyaarka, bandhigyada farshaxanka iyo sawirada, riwaayado iyo waxyaabo kale oo badan, oo dhamaantood ka socda Vigo Maritime Port, oo aad ugu dhow degmada taariikhiga ah ee magaalada.
Aaway O Marisquiño lagu xusaa?
Bandhigga O Marisquiño wuxuu ka dhacaa aag ka badan 150.000 oo mitir murabac oo u dhow xaafadda taariikhiga ah ee Vigo, halkaas oo tijaabooyinka waaweyn ee aadka u weyn ee xafladda lagu qabto, ka hor iyo dhinaca badda, gaar ahaan Paseo de las Avenidas, Trasatlánticos Pier, Nautical iyo Breakwater. Halkaas ayaa lagu soo bandhigayaa aagag walba oo lagu ciyaaro iyo bandhig dhaqameed. Waxay noqotay dhacdo caan ka ah magaaladan!
El Ama Marisquiño Waxaa ku yaal 3 koob oo adduunka ah, Koobka Adduunka ee Kabaha Isboortiga, Koobka Adduunka ee Skateboarding Miniramp iyo Dirt FMB World Tour, oo lagu dhaliyay kala-saaridda adduunka, iyo halka ay ku kulmaan dhammaan cayaartoyda ugu fiican, qaran iyo caalami. Dhawaan, FIBA ​​3x3 Basket-ka ayaa lagu dhex daray maadooyinka waxayna ku boodboodeen qaybta Dahabka ee Qashinka Uumiga.
DAGAALKA GUUD EE GRANDVALIRA
Waa maxayGrandvalira Wadarta Dagaalka?
Grandvalira Total Fight waa mid ka mid ah tartamada barafka iyo xorriyadda barafka ee heer qaran iyo heer caalami maanta la aqoonsan yahay! Waa a tartan xad dhaaf ah aad u xiiso badan maxaa yeelay kartida, tabaha iyo qaabka asalka ah ee tartamayaasha waa lagu muransan yahay, qeybaha lab iyo dhadig.
Tartan baraf baraf ah iyo freeski ayaa la qabtay en Snowpark El Tarter (mid ka mid ah jardiinooyinka hormoodka ka ah Jasiiradda) Waxaa la abuuray 2005-tii wuxuuna si aad ah u kordhay ilaa waqtigaas. Xaqiiqdii, daabacaaddeeda labaad waxay ku heleysaa 3 xiddig oo kalandarka 'TTR' (Tigidhada loogu talagalay safarka), wareegga halbeegga ee barafka caalamka.
Laakiin sidoo kale waa in 2009, wareegga TTR uu siiyay xiddig! Waqtigaas 4-ta xiddigood waxay sababeen xamaasad weyn oo caalami ah oo gelisay saldhigga Grandvalira khariidada. Waxaas oo dhami waxay ku soo beegmeen imaatin badan fuula leh heer sare oo deegaanka ah, oo doonayay inay ka qaybgalaan.
The Grandvalira Total Fight, oo ah tartankii ugu weynaa ee xorriyadda ee koonfurta Yurub, ayaa ugu dambayntii helay (2013) 5-tii xiddig ee wareegga TTR ee barafka lagu fadhiyo wuxuuna galaa Qaybta Dahabka ee wareegga AFP, Tixraac caalami ah oo ku yaal freeski.
DAKAR OO SOO BANDHIGAY
Wadada Rally Dakar: Waa sidee?
Tobanaankii sano ee la soo dhaafay, Dakar Rally waxay noqotay mid ka mid ah tartamada baabuurta ee ugu daran uguna halista badan muddooyinkii ugu dambeeyay. Markii hore loo yaqaan "Rally Paris-Dakar", waa tartan baabuur sanadle ah isku soo bax, oo ay soo qabanqaabiyeen ASO (Amaury Sport Organisation) tan iyo bishii Diseembar 26, 1978.
Markii tartanku bilaabmay, tartanku wuxuu ka bilaabmi jiray Paris oo wuxuu ku dhammaan lahaa 10.000 kiilomitir dheeraad ah, caasimadda Senegal, Galbeedka Afrika. In kasta oo markii dambe ay ka bilaabmayso Buenos Aires (Argentina), haddana ugu dambayntii 2019 waxaa lagu dhawaaqay in lagu qaban doono Sacuudi Carabiya Bariga Dhexe oo leh 12 marxaladood, shan kun oo kiiloomitir waqtiyeysan iyo in ka badan 7800 km oo wadar ah. Muddo sanado ah, Dakar Rally waxaa loo aqoonsaday inuu yahay mid ka mid ah tartamada ugu baahida badan uguna adag adduunka, taas oo tartamayaasheedu ay muujinayaan dhammaan dhiirrigelintooda, geesinimadooda iyo hibo isboorti ee ka dhexeysa meelaha ugu adag adduunka.
UTMB TSocodka Tareenka (ULTRA-TRAIL DE MONT-BLANC)
Hordhac yar ayaa u baahan Ulta-Trail de Mont-Blanc! Maratoonkan aadka loo yaqaan ee aadka u caanka ah ayaa sanadkiiba ka dhaca Alps, isagoo sii mara Faransiiska, Talyaaniga iyo Switzerland, halkaasoo in ka badan 10.000 oo tartamayaashu ay daboolaan masaafo dhan 172 km iyo farqi togan oo qiyaastii ah 10.000 mitir. Xiddigaha adduunka ee raadraaca waxay ku kulmaan Chamonix sannad kasta oo ay la socdaan inta kale ee orodyahannada hiwaayadda ah, si ay ugu tartamaan 7da tartan ee dhacdada.
Sidee Montblanc UTMB Ultra Trail u eg yahay?
Waqtigaan la joogo, UTMB waxaa loo yaqaanaa tartanka loogu raadinta badan yahay orodka dhammaan iyo sidoo kale kan ugu sharafta badan. Tartan quraafaad ah oo matalaya khibrad gaar ah! Runtu waxay tahay in lagu biiro Tartankan ku wareegsan Mont-Blanc ayaa ah, wax walba ka sarreeya, horumar shakhsiyeed oo ka yimaada qoto dheer gudaha, halkaas oo dadaalka, u heellan iyo dhiirrigelintu ay u horseedaan inay ka gudbaan oo ay ka adkaadaan meelaha ugu quruxda badan ilaa ay ka gaarayaan ujeeddada ugu dambeysa. Ilaa hadda, diiwaanka loogu talagalay 'Montblac ultratrail' waxaa haya Pau Capell, oo ahaa guuleyste Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 20 saacadood, 19 daqiiqo iyo toddobo ilbiriqsi.
CAALAMKA CAALAMIGA AH EE CIYAARAHA BADAN (FISE)
Tani waa laga yaabaa inay tahay tartanka isboorti ee ugu muhiimsan Yurub oo dhan! JanIsaga waxaa la soo bandhigayaa International Festival of Extreme Sports (FISE) bartamaha magaalada Montpellier, xaafada Rives du Lez (France), wax badan oo ka mid ah ciyaartooyda qaybaha Bmx, skate, roller, skateboard, freestyle motocross, wakeboard, sklopestyle, baaskiil buuro, iyo baaskiil buur. Mid ka mid ah munaasabadaha ugu wanaagsan ee bilaashka ah ee loogu talagalay kuwa jecel dhacdooyinka ugu daran!
Jawiga tartanku waa mid aad u faraxsan, damaashaad iyo gebi ahaanba lagu soo oogay adrenaline, wuxuu gaarayaa ku dhowaad 550.000 oo daawadayaal ah khibrad 5-maalmood ah, taas oo isugu jirta qaab aan caadi ahayn sida ugu wanaagsan ee cayaaraha xad-dhaafka ah, xafladaha, gastronomy, aqoon isweydaarsiyada aqoonta. isboorti, riwaayado iyo madadaalo badan oo loogu talagalay kuwa jecel isboortiga iyo firaaqada xad dhaafka ah.
FISEku dhashay Montpellier​ koonfurta Faransiiska 1997, ka dibna, ilaa 2014, FISE World Series ayaa bilaabmay, dhacdooyinkoodana kuwii ugu fiicnaa horyaalkan loo wareejiyay meelo kala duwan oo meeraha ah.
Muxuu ku saabsan yahay Marathon-ka Jungle?
Ka mid ah jinsiyadaha ugu ba'an uguna adag dhammaan, hoggaaminta waxaa hogaaminaya Jungle Marathon o Maratoonka Jungle.Tartan gaar ah orodka geesinimo leh uguna xiisaha badnaa dhamaan Sababtee? Hagaag, maxaa yeelay maahan maaratoon kuwa kuwa caadiga ah iyo kuwa caadiga ah. Waxaa looga dabaaldegaa sanadkiiba hal mar Amazon-ka Brazil, waa meel si dhab ah looga helo qatarta hawdka.
Tartamayaasha 75 ee maratoonka ayaa wajihi doona inta lagu guda jiro tartanka heerkulka sare ee aan hoos uga dhicin 40º oo leh 99% qoyaan, taas oo ay sii dheer tahay inay maraan wabiyada leh alligators iyo piranhas, sidoo kale waxay la kulmayaan dhir aad u cagaar badan oo waxay u oggolaanaysaa iftiin aad u yar inuu soo galo, taasina waxay qarinaysaa xayawaanno muusiko ah oo argagax leh, oo ka bilaabma abeesooyin ilaa jaguar. Haa taasi waa mid xad dhaaf ah, sax?
Marathon-ka Jungle, oo si rasmi ah u curtay 2003, waxaa lagu qabtaa seddex nooc oo masaafada ah: daabacaadda ugu gaaban waa 42,2km, laakiin waxaad kaloo dabooli kartaa masaafo dhan 127km oo loo qaybiyay 4 marxaladood. Kadibna, noocyadeeda ugu ballaadhan waxay ku lug leedahay waddo isku xirta 254 km wadar ahaan, iyo khilaafaadka lix marxaladood.
Maratoonkan waalan, xirfadaha jireed, maskaxeed iyo hanuuninta waa inay ahaadaan kuwa ugu sarreeya si ay uga badbaadaan hal-abuurkan aadka u daran ee mid ka mid ah goobaha dabiiciga ugu quruxda badan ee jira, sida Amazon.
Waxa ugu xiisaha badan ayaa ah inaysan jirin waddo qeexan oo loo maro wadada, laakiin haddii ay run tahay in tartamayaashu ay sugayaan lix maalmood oo dhib badan oo caqabadaha muusikada ilaa ay ka gaaraan hadafka ugu dambeeya, oo ay tahay inay soo iibsadaan sahaydooda cuntada iyo biyaha laftooda, Dhiso hooy kuu gaar ah oo aad wajahdo dhammaan caqabadaha kugu sugaya hawdka. Miyaad ku dhiiran doontaa inaad ka qayb gasho tartankan xad dhaafka ah?
BADDA QALABKA BADAN
Waa maxay nooca loo yaqaan 'Sea Otter Classic'?
Sidee looma xusin Badda Otter Classic! Mid ka mid ah cayaaraha xiisaha badan ee bannaanka iyo ciidaha baaskiilka adduunka. Waxaa lagu qaban jiray tan iyo 1991dii Fort Ord ee ku taal Monterey County, California (Mareykanka).
Dhacdada waxaa loogu magac daray "Sea Otter Classic" oo macno ahaan loogu sharfayo otter-ka badda, oo u dhashay deegaanka. Daabacaaddiisii ​​ugu horreysay, xafladda waxaa lagu soo dhoweeyay 350 ciyaartoy iyo 150 kale oo daawadayaal ah. Waxay hadda soo dhaweynaysaa in kabadan 9600 oo ciyaartooy ah waxayna dhaafeysaa 72.500 oo taageereyaal ah oo isu soo uruuriya si ay markhaati uga noqdaan waxa ugu fiican ee baaskiil wadida waxayna ku raaxaystaan ​​4 maalmood oo ay ka buuxaan tacabur ciida weyn ee baaskiilka adduunka.
Laga soo bilaabo 1991 ilaa 2002, Badda Otter Classic waxay dhacday intii lagu jiray bishii Maarso, laakiin ka dib 2003 waxay u wareejisay taariikhdeeda illaa Abriil si looga faa'iideysto cimilada Californian ee fudud.
Waa maxay Sea Otter Europe Baaskiil Show Giron?
Waxa kale oo jira Bandhigga Baaskiilka Badda ee 'Otter Europe' ee Magaalada Girona - Costa Brava ee Yurub. Laga soo bilaabo 2017 waxay asal ahaan ka soo jeeddaa oo lagu dhiirrigeliyaa Xeebta 'Otter Classic' Waxaa laga yaabaa inay tahay tan ugu fiican uguna muhiimsan ee xafladaha baaskiillada Yurub ee loogu talagalay dhalinyarada hibada leh iyo xirfadlayaal aasaasay isboortiga.
Waa maxay Marathon Barkley?
Waxaa laga yaabaa inaadan wax badan ka maqal tartankan xiisaha badan ee xiisaha badan, laakiin Maraska Barkley wuxuu hubaa inuu noqon doono mid ka mid ah dhacdooyinka isboorti ee ugu daran, dalbashada iyo dahsoon ee adduunka oo dhan! Taariikhda maratoonka oo dhan, kaliya 15 qof ayaa awood u yeeshay inay si guul leh ku dhammaystiraan safarkooda halista badan ee adag.
Waxaa la bilaabay 1986 abuureheeda Gary "Laz" Cantrell, oo si fudud loogu yaqaan "Lake Lake". Waa tartan fog-fog oo aad uga fog astaamaha caadiga ah ee maratoonka, noqoshada dhacdadii ugu adkayd uguna adkayd ee adduunka ka dhacda.
Waxaa laga yaabaa inaad horey u qiyaastay, maahan tartan caadi ah gabi ahaanba, runtiina waa wax la yaab leh, marka hore maxaa yeelay diiwaangelinteedu waa nidaam sir ah oo adag: kaliya iyada oo loo marayo emayl waqtiga saxda ah iyo taariikhda loo abuuray (sharaxay dhiirigelinta iyo manhajkaaga xirfadeed) waxaa laga yaabaa ama laga yaabaa inaadan helin fursad aad uga mid noqotid 40ka orodyahannada mudnaanta leh ee kaqeyb qaadanaya qariibka Barkley marathon. Intaas waxaa sii dheer, waxay ku dhacdaa taariikhda yeedhitaanka qarsoodiga ah, meel aan la aqoon oo ka tirsan gobolka Tennessee, USA.
Muxuu Marathon-ka Barkley u adag yahay?
Ujeeddada Barkley Marathon waa in lagu daboolo wadar dhan 160 kiilomitir oo hoos u dhac toosan leh oo ka badan 20.000 mitir muddo xaddidan oo ah 60 saacadood Tartanku wuxuu ka kooban yahay 5 wareeg oo shiraac bilaash ah, oo masaafada ugu yartahay. Qaybta ugu daran waxay ka timaaddaa isku dheelitirnaan la'aanta, baahida loo qabo marin habeynta ugu habboon iyo meesha bannaan, iyo xaaladaha aan la garanayn ee ay tartamayaashu ku dhiiran karaan, maadaama aysan garanaynin meesha ay tahay iyo xaaladaha cimilada ay la kulmi karaan.
Tan ugu xiisaha iyo xiisaha badan tartankan waxay ku jirtaa astaamaha badbaadada iyo jiritaanka. Waana intaas marka lagu daro, intaad wadada marayso waa inaad ku taallo meesha aad ka soo ururineyso bogagga 14 buug oo ku qarsoon meesha, tartamayaashuna waa inay bilaabaan oo ay keenaan caddeyn ahaan inay dhab ahaantii si sax ah u sameeyeen wadada. Aad u xiiso badan maahan?
Iyadoo aan horay loo siin, ama aan la kaalmeynin nooc kasta, iyo isbaaro la'aan, afartanka orodyahan waxay si fudud ugu dhiiran karaan dabeecadda iyaga bib, compass iyo daawasho la'aan GPS.Tani waa waxa kaliya ee ay ka helaan ururka kahor intaysan bilaabin.
Su Caannimada ayaa badatay sanadihii ugu dambeeyey, gaar ahaan ka dib markii la bilaabay 2014 ee Tartanka Cunaaya Dhalintiisa (Tartanka Cunaaya Dhallinyarada), documentary-ka Netflix ee falanqeynaya oo muujinaya tartankan cajiibka ah ee aadka u daran. Miyaad ku dhiiran kartaa inaad email u dirto Lake Lake?
Miyaad dhadhamin kartaa tartamada tacaburrada xad dhaafka ah iyo dhacdooyinka sida annaga oo kale ah? Noo sheeg kuwa kuugu cadcad!
Xirashada maaskaro barafka wanaagsan waa lagama maarmaan marka la sameynayo isboorti xad dhaaf ah barafka.Ma waxaad dareemeysaa inaad diyaar u tahay inaad ka gudubto halista dabeeciga markaad barafka wado? Baro 5ta
Baro khibrada barafka ee buuraha Colorado!
Ku socoshada xawaare buuxa hoos u dhaadhaca ee Colorado iyo dareemida hawo saafi ah halka ka barafka dhaadheer ee aan la aqbali karin waa la mid. Marabtaa inaad waxbadan kabarato barafka barafka Colorado? Haa